Zava-misy sy fampahalalana momba an'i Eropa | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Toerana fitsangatsanganana, Fialantsasatra any Eropa, General
Ny kaontinanta taloha dia toerana feno tantara, izay misy kolontsaina maro mifamatotra sy toerana malaza izay napetrakay rehetra tamin'ny lisitry ny dia hataontsika. Na eo aza ny habeny kely raha ampitahaina amin'ny kaontinanta hafa toa an'i Amerika na i Azia, dia harena ara-kolontsaina sy ara-tantara mahatonga an'i Eropa ho iray amin'ireo kaontinanta manan-danja sy mahaliana.
Betsaka ny zava-misy sy fampahalalana momba an'i Eropa. Ny sasany amin'ireto angon-drakitra ireto dia mety ho efa mahazatra, fa ny maro hafa dia mahagaga. Ka hataontsika a fanangonana an'ity vaovao ity avy any Eropa mety hahaliana izany.
3 Zava-misy mahafinaritra momba an'i Eropa
4 Tantaran'i Eropa
5 Mandehandeha any Eropa
Any Eropa dia misy total Fiteny ofisialy 24 izao, ny sasany fanta-daza ary ny sasany tsy dia be loatra. Ny be mpampiasa indrindra dia ny rosiana, italianina, anglisy, alemanina na frantsay. Misy ihany koa ireo fiteny ofisialy tsy dia fantatra loatra, toa ny tiorka, serba, romana, poloney na masedoniana.
Ho fanampin'ireo fiteny ofisialy eropeana ireo dia misy fiteny rezionaly sy vitsy an'isa maherin'ny 60 izany dia mety ho mpiasam-panjakana any amin'ireo firenena, toy ny any Espana miaraka amin'i Basque, Catalan ary Galisiana. Misy koa ny hafa any Eropa, toa ny Frisian, Welsh, Sami na Yiddish. Vondron'olona madinidinika no miteny azy ireo, saingy na eo aza ny zava-drehetra ezahin'izy ireo hitazona izany harem-piteny izany.
Ilay lehibe ny ankamaroan'ny fiteny dia avy amin'ny Indo-Europe, izay inoana fa misy ifandraisany amin'ny fiaviany, toa ireo fiteny Romance izay nalaina avy tamin'ny fiteny latina, alemà, slavia na belta. Na izany aza, misy ihany koa ny fiteny tsy Indo-Eoropeana sasany, toy ny Basque na Arabo.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra dia izany Tsy kaontinanta irery i Eropa ny tenany, saingy antsoina toy izany miorina amin'ny resaka politika, fa tsy ara-jeografika, satria tsy velaran-tany hafa tsy mitovy amin'i Azia. Samy mamorona lamesa antsoina hoe Eurasia. Ireo kaontinanta hafa dia noho ny antony ara-jeografika, toa an'i Afrika na Oseania.
ny fetran'ny Eropa izy ireo dia hita any avaratr'i Cape sy ny tendron'ny tendrontany avaratra ary ao amin'ny Ranomasimbe Atlantika any andrefana. Amin'ny faritra atsimo dia misy ny Ranomasina Mediteraneana, ny Ranomasina Mainty ary ny Kaokazy. Any atsinanana no misy ny Tendrombohitra Ural sy ny Reniranon'i Ural. Ireo sisin-tany ireo dia novaina rehefa niova ny tantara.
El tsy dia sarotra loatra ny fanamaivanana an'ity kaontinanta ity, miaraka amin'ny lemaka afovoany lehibe sy faritra be tendrombohitra, misy tendrombohitra antitra. Amin'ny ankapobeny, dia fitambaran'ny lemaka sy tendrombohitra izay manome karazana tontolo iainana sy toetr'andro lehibe.
Zava-misy mahafinaritra momba an'i Eropa
Eoropa dia kaontinanta manana tantara maro, miaraka amin'ny zava-misy mahaliana maro izay mety hahaliana. Amin'ny resaka habe, Russia no firenena lehibe indrindra ary ny Vatican no kely indrindra, satria izy no raisina ho firenena na dia ao anatin'ny fetra ao Roma aza. Misy ihany koa ireo firenena bitika hafa toa an'i Liechtenstein na Andorra.
Eoropa no kaontinanta kely indrindra eto an-tany, aorian'i Oseania. Izy io dia manodidina ny 10,180.000 kilometatra toradroa ary manodidina ny 700 tapitrisa ny olona monina ao, na dia ny kaontinanta misy ny tahan'ny zaza teraka ambany indrindra aza, noho izany dia mihantitra hatrany ny mponina. Ny tanànany lehibe indrindra dia i Paris, misy olona 11 tapitrisa eo ho eo.
Tombanana fa amin'ny faharoa Ady lehibe 32 tapitrisa no maty olona any Eropa, izay 2,5% amin'ny mponina eran-tany ankehitriny. Nandritra ny tantarany, niaraka tamin'ny ady sy ny fandreseny, firenena 70 teo ho eo no nanjavona tamin'ny sari-tany, izay nanova ny endriny. Tany am-boalohany 80 ka hatramin'ny 90% n'i Eropa no ala, fa ankehitriny 3% ihany no mijanona ao Eropa Andrefana.
Ity anarana ity ho an'i Eropa dia inoana fa avy amin'ny printsy fenisianina taloha avy amin'ny angano grika. Niresaka ny zanakavavin'ny Mpanjaka Tyro izy ireo, izay misy tantara momba ny fakana an-keriny azy, rehefa nitondra azy tany Kreta i Zeus.
Eoropa amin'ny maha-kaontinanta azy porofo nanomboka tamin'ny prehistory, miaraka amin'i Neanderthal man, izay zanatany any Eropa, ary Cro-Magnon, Homo Sapiens izay niavian'ny lehilahy maoderina. Ny tantaran'ny kaontinanta dia be pitsiny, mandalo tsangambato an-tsoratra toy ny fotoanan'ny Fanjakana Romanina, ny fianjerany, ny Moyen Orient, ny Modern Age, izay heverina fa hahatratra ny taonjato faha-XNUMX, sy ny vanim-potoana ankehitriny, miaraka amin'izao tontolo izao Ny ady sy ny lalàm-panorenana farany an'ny Vondrona eropeana, izay iainantsika ankehitriny ary mbola iharan'ny fanovana.
Ny dingan'ny Vondrona Eropeana dia nanomboka tamin'ny taona 50, fa ny lalàm-panorenany manokana dia notohizana Novambra 1 avy amin'ny 1993, rehefa manan-kery ny fifanarahana Vondrona Eropeana. Izy io dia mandrafitra ny fanjakana eropeana 28, ary mikendry ny hampifangaro sy hizara ny fandaminana azy rehetra. Misy ihany koa ny faritra ivelany indrindra izay an'ny EU, saingy noho ny halaviran'izy ireo dia tsy misy lalàna sy adidy sasany toa an'i Azores, Madeira na ny Nosy Canary.
Mandehandeha any Eropa
Raha handeha hitsangatsangana any amin'ireo firenena misy mpikambana 28 ao amin'ny Vondrona eropeana isika dia tsy maintsy mahafantatra antsipiriany sasantsasany. ny olom-pirenen'ny Vondrona Eropeana Afaka mivezivezy tsy misy ID sy tsy misy pasipaoro izy ireo raha mamakivaky ireo firenena ao amin'ny faritr'i Schengen, izay faritra iraisana izay tsy misy fetra ho an'ny olom-pirenena intsony. Raha mankany Bulgaria, Kroasia, Sipra, Irlanda, Romania na Royaume-Uni ianao dia tsy maintsy mitondra karapanondro na pasipaoro manan-kery satria tsy an'ny faritra tsy misy sisin-tany izy ireo.
Para ireo izay tsy fiaraha-monina Pasipaoro manan-kery hatramin'ny telo volana aorian'ny daty antenaina handaozana ny firenena eropeanina dia takiana, ary efa folo taona lasa izay no navoaka. Ianao koa dia mila maka antoka fa tsy mila visa. Misy firenena sasany izay tsy mila izany noho ny fifanarahana iraisam-pirenena, na dia mitaky izany aza ny ankamaroan'ny olona, ​​noho izany dia mila mijery ireo fepetra takiana ianao amin'ny dia, satria maharitra fotoana iray ny fangatahanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Zava-misy sy fampahalalana momba an'i Eropa
Rio de Janeiro (Brezila): fitsangatsanganana mankany amin'ireo nosy tropikaly malaza